Da Vinci Code | Calvary Burmese Church
June 25, 2011 December 21, 2012 / Peter Lwin
လွန်ခဲ့သောနှစ်အနည်းငယ်ခန့်က ကမ္ဘာ ကျော်ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင် (Mel Gibson) ရိုက် ကူးသော (Passion of Christ) ရုပ်ရှင်ကား သည် ကမ္ဘာတ၀ှမ်းရှိ ရုပ်ရှင်ပရိတ်သတ်များ ၏နှလုံးသားကိုဆွဲကိုင်လှုပ်ခါနိုင်ခဲ့ကာ ၀င်ငွေ အမြတ် မီလျံ (၃၀၀)ကျော်ရရှိခဲ့သည်ကို အားလုံးအမှတ်ရနေဦးမည်ဖြစ်ပေသည်။ ယခုတဖန် ရုပ်ရှင်ပရိတ်သတ်များ၏စိတ်ဝင်စားမှုကို ရယူ နိုင်မည့် ဘာသာရေးကိုအခြေခံသည့် ရုပ်ရှင် တစ်ကားအမေရိကားတွင်ရုံတင်ပြသနေပေသည်။ စာရေးဆရာDan Brown ရေးသား သောDa Vinci Code ကိုရိုက်ကူးထားသည့် ရုပ်ရှင်ကားကြီးပင်။
ထိုစာအုပ်ကိုဖတ်ရှုသူတိုင်း မေရီမာဂဒလ သည်အဓိကနေရာတွင်ပါဝင်ကပြသူဖြစ် ကြောင်းသတိထားမိကြပေမည်။
ထိုစာအုပ်တွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်းဆို လျင် သခင်ယေရှုနှင့် တမန်တော်များ၏ နောက် ဆုံးညစာစားပွဲ The Last Supper တွင်အသုံးပြုခဲ့သည်စပျစ်ရည်ခွက်သည် သခင် ယေရှု၏အသွေးတော်ကိုဆောင်သည့်စပျစ် ရည်ထည့်သည့် ခွက်တစ်ခုမဟုတ်ခဲ့ဘဲ သခင် ယေရှု၏အသွေးဖြင့်ရသော ပဋိသန္ဓေကိုလွယ် ထားသည့် လူသားစင်စစ် မေရီမာဂဒလ ဟု အမည်ရသောအမျိုးသမီးဖြစ်သည်။ ထိုအမျိုး သမီးသည် ခရစ်ယာန်ဘာသာ တစ်ခုလုံးကို ကျဆင်းရုံမျ မကပျောက်ကွယ်သွားနိုင်သည် အထိစွမ်း ဆောင်နိုင်သည့်လျို့ဝှက်ချက်များ နှင့်ပြည့်နှက်နေသူဖြစ်သည်ဟု အဆိုပါစာအုပ် တွင် ညွန်းဆိုထားပေသည်။
အဆိုပါစာအုပ်တွင်ပါရှိသည့် ဒဏ္ဍာရီဆန်ဆန် အကြောင်းအရာများကိုဆက်ဖတ်ကြည့် ပါက သခင်ယေရှုသည် အဆိုပါအမျိုးသမီး နှင့်လက်ထပ်ထားကြောင်း စာရာ ဟူသော သမီးငယ်တစ်ယောက်ကိုလည်းနောင်တွင် မွေးဖွါးခဲ့ကြောင်းဆိုထားသည်။ ထိုအဖြစ်အ ပျက်မှန်ကို နာမည်ကျော်ပန်းချီဆရာကြီး Davinci ကအသေအချာနားလည်သိရှိသဖြင့် သူရေးဆွဲခဲ့သည်’နောက်ဆုံးညစာစားပွဲ’ (The Last Supper) ပန်းချီကားချပ်တွင်အမိအရ သရုပ်ဖော်ရေးဆွဲခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း ဖော်ပြထား သည်။
Dan Brown ၏အဆိုအရ ထိုပန်းချီကား တွင်သခင်ယေရှု၏ လက်ယာဖက်တွင်ထိုင်နေ သောသူသည် အနုပညာနှင့် ပတ်သက်သည့် သမိုင်းသုသေသီတိုင်းလက်ခံယုံကြည်သည့် အတိုင်း တမန်တော်ရှင်ယောဟန် မဟုတ်ဘဲ မေရီမာဂဒလ ဖြစ်သည်။ သူတို့နှစ်ယောက် ၏ကြားကိုအသေအချာကြည့်ပါက အင်္ဂလိပ် စာလုံး V ပုံစံကိုတွေ့မြင်ရသည်။ ၄င်းပုံသဏ္ဍန် သည် ရှေးခေတ်နတ်ကိုးကွယ်သူတို့၏ ‘မိန်းမ’ နှင့်သက်ဆိုင်သော သရုပ်ကိုဖော်ပြသည့် အမှတ်လက္ခဏာဖြစ်သည်ဟုဆိုသည်။ ထို့အ ပြင်စာရေးသူက အင်္ဂလိပ်စာလုံး M ပုံသဏ္ဍန် ကိုလည်းထိုပန်းချီကားချပ်တွင်တွေ့မြင်ရကြာင်းဆက်လက်၍ဆိုထားသည်။ ၄င်းမှာ မေရီမာဂဒလ(Mary Magdalene) သို့မဟုတ် (Matrimonio) ကိုသရုပ်ဖော်ထားခြင်းဖြစ် သည်ဟုဆိုသည်။ (Matrimonio) ကိုအဘိဓာန် ထဲတွင်ရှာကြည့်ပါက လက်ထပ်ထိန်းမြားခြင်း နှင့် ဆိုင်သောအသုံးအနှုန်းဖြစ်သည်။
ဆက်လက်ထိုစာအုပ်တွင်ဖော်ပြထားသည် မှာ သခင်ယေရှုသည် ဂျုးလူမျိုးတစ်ဦးဖြစ် နေခြင်းသည် သူအမှန်တကယ် လက်ထပ် ထိန်းမြားခဲ့ကြောင်းကိုခိုင်လုံစေသည့် အရေး ကြီးသည့် သက်သေအထောက်အထား တစ်ခု ဖြစ်သည်ဟုဆိုသည်။ အကြောင်းမှာ ထိုခေတ် ထိုအခါစဉ်က ဂျူးလူမျိုးတို့၏ဓလေ့အရ ယောင်္ကျားတစ်ယောက်သည်အိမ်ထောင်မကျပါက လူရာမ၀င် အဆင့်မမှီဟုသတ်မှတ်ခြင်း ခံရသည်ဟုဆိုသည်။ ထို့ကြောင့် သခင်ယေရှု ၏ဖခင်သည်သခင်ယေရှုအတွက် အဖော်သို့မဟုတ် အိမ်ထောင်ရှင်ဖက်ကိုစီစဉ်ပေးခဲ့မည် ဖြစ်သည် အကယ်၍မစီစဉ်ပေးခဲ့လျင်လည်း ကျမ်းစာ၏တနေရာရာတွင်ဖော်ပြနေမည်ဖြစ်သည်။ သမ္မာကျမ်းစာ၏မည်သည့်နေရာတွင် မျှဖော်ပြမထားခြင်းသည် သခင်ယေရှုအိမ် ထောင်ကျခဲ့သည်ဆိုသော အယူအဆကိုသက် သေထူနေသကဲ့သို့ဖြစ်နေသည်ဟု အဆိုပါစာ ရေးသူက ဆိုထားသေးသည်။
စာရေးသူ အဓိကကိုးကားသုံးနှုန်းသော ကျမ်းကိုးစာအုပ်များကိုကြည့်လိုက်ပါက (ွGnostic Gospels) ဟုခေါ်သည့် အီဂျစ်နိုင်ငံ (Nag Hammadi) အရပ်တွင်တူးဖော်ရရှိ သည်ရှေးခေတ်ပုရပိုဒ်များဖြစ်သည်။ စာရေး သူ၏အဆိုအရ ဤပုရပိုဒ်များသည် ခရစ်ယာန် ဘာသာနှင့်ပတ်သက်၍ရှာဖွေတွေ့ရှိရသည့် အဦးဆုံးသောအရာများဖြစ်ပြီးသမ္မာကျမ်းစာ ၏ (The four Gospels) နှင့်လည်းကွဲလွဲနေသည်ဟုဆိုသည်။
စာရေးသူကနောက်တဖန်ဖော်ပြထားသည် မှာ သခင်ယေရှုကသူမရှိတော့သည့်နောက် ပိုင်းသူ၏အမှုတော်မြတ်ကိုဆက်လက်ဦးဆောင် ရန် မေရီမာဂဒလကိုတာဝန်ပေးထားကြောင်း၊ ဤအကြောင်းကြောင့် တမန်တော်ရှင်ပေတရု သည် မေရီမာဂဒလ ကိုမနာလိုဝန်တိုဖြစ်နေ ကြောင်းနှင့် ဤအဖြစ်မှန်ကိုသိရှိသော ပန်းချီ ဆရာ (Davinci) က သူ၏ပန်းချီတွင်သရုပ်ဖော် ဆွဲထားကြောင်းရေးသားထားသည်။ ထိုပန်းချီ တွင် မေရီမာဂဒလဖြစ်ပါသည် ဟု စာရေးသူ က ယုံကြည်သော သူ၏လက်ယာဖက်တွင် ထိုင်နေသူသည် တမန်တော်ရှင်ပေတရုဖြစ် ကြောင်းနှင့် မေရီမာဂဒလ အပေါ်မနာလို ၀န်တိုဖြစ်မှုကိုသရုပ်ပေါ်စေရန် သူ၏လက်ကို မေရီမာဂဒလ ၏လည်ပင်းပေါ်တွင် ဆွဲထားကြောင်းဆိုထားသည်။
စာရေးသူ (Davinci) က သခင်ယေရှုအိမ် ထောင်ကျကြောင်းသူယုံကြည်ရသည့် အချက် တစ်ချက်ကိုဆက်လက်ဖော်ပြထားသည်မှာ သခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်သည် မင်းမျိုးမင်းနွယ် ဖြစ်သည့် ဒါဝ်ဒ်ဘုရင်ကြီး၏အဆက်အနွယ် ထဲမှဖြစ်သောကြောင့် အစ္စရေးလ်ဂျူး လူမျိုး တို့၏နောက်မင်းနွယ်မင်းဆက်တပါး ဖြစ်သော (Benjamin) အနွယ်ဝင်ဖြစ်သည့် မေရီမာ ဂဒလနှင့်လက်ထပ်ခြင်းဖြစ်သည်ဟုဆိုသည်။ ဂျူးလူမျိုးတို့၏တော်ဝင်မျိုးဆက်ကိုဆက်လက် ထိန်းသိမ်းရန်လက်ထပ်ခြင်းဖြစ်သည်ဟုဆိုလို ဟန်ပင်။ သခင်ယေရှုချီဆောင်တော်မူခြင်းခံရ ပြီးနောက် သခင်ယေရှု၏ ဦးလေးတော်သူ အရိမဿဲ မြို့သားယောသပ်က ကိုယ်ဝန်အရင့် အမာ နှင့်ဖြစ်နေသော မေရီမာဂဒလ ကို ပြင်သစ်နိုင်ငံသို့ခေါ်ဆောင်သွားပြီး သခင် ယေရှု၏ရင်သွေး စာရာ ကိုပြင်သစ်နိုင်ငံတွင် ဖွားမြင်ခဲ့သည်ဟုထိုစာအုပ်တွင်ရေးသားထား သည်။ စာရာ သည်ပြင်သစ်နိုင်ငံတွင်ကြီးပြင်း လာခဲ့ရာ ရာစုနှစ် ၅ ခုတိုင်အောင်သူ၏မျိုး ဆက်သည်တိတ်ဆိတ်စွာလူမသိသူမသိ ရှင်သန်လာခဲ့ ပြီးမှ ပြင်သစ်တော်ဝင်မျိုးနွယ်မှ တစ်ယောက်နှင့်ပေါင်းစပ်ကာ (Merovingian) ဟူသောမင်းမျိုးနွယ်ဆက်သစ်ဖြစ်လာသည် ဟု ဆိုသည်။
စာရေးသူ ကိုယ်တိုင်က သူရေးသားသောဤစာအုပ်သည် (fiction) စိတ် ကူးယှဉ်ဇတ်လမ်းသာဖြစ်ကြောင်း ၀န်ခံထား သော်လည်း စာဖတ်သူအတော်များများက ဤ ဇတ်လမ်းသည်အမှန်တကယ်ဖြစ်နိုင်သည်ဟု ယုံကြည် နေကြသောကြောင့် ဤဇတ်လမ်းတွင် ပါသောအကြောင်းအရာများကို သမ္မာကျမ်းစာ နှင့်ယှဉ်လျက်အနည်းငယ်ဖော် ပြလိုသည်။
သမ္မာကျမ်းစာထဲတွင်သူမ၏အကြောင်းအ ရာများကို (မဿဲ ၂၇း၅၅၊ မာကု ၁၆း၉၊ လုကာ ၈း၂) များတွင်တွေ့နိုင်ပြီး ကျမ်းစာအဆိုအရ သူမသည် သခင်ယေရှုသွားရာနောက် တ ကောက်ကောက်လိုက်ပါသည့် အမျိုးသမီးအ ချို့တွင်တစ်ယောက်အပါအ၀င်ဖြစ်သည်ကို တွေ့ရသည်။ မာကု ၁၆ ထဲတွင် သခင်ယေရှု သည်သူမအထဲမှနတ်ဆိုးများကိုနှင်ထုတ်သည် ဟုတွေ့ရှိရသည်။ မဿဲ ၂၇း၄၅ ကသူမသည် သခင်ယေရှု အမှုရင်ဆိုင်စဉ် သူမလည်းရှိနေ ကြောင်းဖော်ပြထားပြီး ရှင်လုကာ ၂၃း၅၆ ထဲတွင် သူမသည် အရိမဿဲ မြို့သား ယောသပ် ကသခင်ယေရှုကိုဂူသွင်းမြုပ်ရန်ပြုလုပ်စဉ် စောင့်ကြည့်နေကြောင်းဖော်ပြထားသည်။ ယော ၂၀း၁-၂၊ ယော ၂၀း၁၅-၁၆-၁၈ များတွင် လည်းသူမ၏အကြောင်းကိုတွေ့မြင်နိုင်သည်။ ဤသည်တို့မှာ သူမ၏အကြောင်းကိုသမ္မာ ကျမ်းစာ၏ဖော်ပြချက်များဖြစ်သည်။
(၂) အိမ်ထောင်မပြုဘဲနေခြင်းသည် ဂျူးလူမှု ရေးစနစ်တွင်အမှန်တကယ် ကဲ့ရဲ့စရာဖြစ်ပါသလား။
ဘုရားသခင်၏အလိုတော်နှင့်ပြည့်စုံသော အိမ်ထောင်ပြုခြင်းကိုဘုရားအလိုတော်ရှိသော်လည်း အိမ်ထောင်မပြုဘဲနေခြင်းသည် ကဲ့ရဲ့ ရှုံ့ချစရာ ဖြစ်ကြောင်းကျမ်းစာ၏မည်သည့် နေ ရာတွင်မျှဖော်ပြထားခြင်းမရှိကြောင်းတွေ့ရှိရ သည်။ ထို့အပြင်ဂျုးလူမျိုးတို့၏ တိကျပြင်း ထန်သော ဘာသာရေးစနစ်အောက်တွင် ကြီး ပြင်းလာသော တမန်တော်ရှင်ပေါလုက ၁ကော ၇း၁၊ ၇ များတွင် ယောင်္ကျားသည်အိမ်ထောင် မပြုဘဲနေနိုင်လျင်ကောင်းသည်ဟုပင်ဆိုထား သည်ကိုဖတ်ရှုနိုင်သည်။
သခင်ယေရှုသည်မေရီနှင့်အမှန်တကယ် လက်ထပ်ခဲ့သည်ဆိုလျင်ကျမ်းစာထဲတနေရာ ရာတွင်ဖော်ပြမည်သာဖြစ်သည်။ အဘယ် ကြောင့်ဆိုသော်လက်ထပ်ခြင်းသည် ဘုရား သခင်၏အလိုတော်ဖြစ်ကြောင်း ကမ္ဘာဦးကျမ်း ၂း၂၄ တွင်တွေ့ရှိနိုင်သည်။ ဟေဗြဲ ၁၃း၎ တွင် လည်း” ခပ်သိမ်းသောသူတို့၌ မင်္ဂလာဆောင် ခြင်းအမှုနှင့် သစ္စာသံဝါသပြုခြင်းအမှုသည် အသရေရှိစေလော့ . . . .” ဟုဆိုထားသည်။ ထို့ကြောင့် ကျမ်းစာအရ အသရေရှိသည်ဟူ သော မင်္ဂလာဆောင်ခြင်းအမှုကိုသခင်ယေရှု အမှန်တကယ်ပြုခဲ့ပါလျင် မြေကြီးလက်ခတ် မလွဲ သမ္မာကျမ်းစာတွင်ဖော်ပြထားပေမည်။ သမ္မာကျမ်းစာတွင် သခင်ယေရှုလက်ထပ်ကြောင်း မည်သည့်နေရာတွင်မျမတွေ့ရပါ။
(၄) သခင်ယေရှုသည်သူ၏တော်ဝင်မျိုး ဆက်ကိုထိန်းသိမ်းရန်တော်ဝင်သူ မေရီ မာဂဒလ နှင့်လက်ထပ်ခဲ့ပါသလား။
ဤအဆိုကိုဖြေရှင်းရန် လွယ်ကူလှပါသည်။ မေရီမာဂဒလ သည် ဘင်ဂျမင် နွယ်မှ ဆင်းသက်လာသူဖြစ်ကြောင်းမည်သည့် သက်သေအထောက်အထား (ကျမ်းစာတွင်ဖြစ်စေ သမိုင်းတွင်ဖြစ်စေ) တစ်ခုမျမရှိပါ။ ဘင်ဂျမင် အနွယ်သည် ဂျူးလူမျိုးများ ၏ တော်ဝင်မင်းမျိုးမင်းနွယ် ဖြစ်သည်ဟုမည်သည့် အခါတွင်မျ မည်သည့်ကျမ်းစာ၊ သမိုင်းအ ထောက်အထားတွင်မျဖော်ပြထားခြင်းမရှိပါ။ ယုဒအနွယ်သာလျင်ဂျူးလူမျိုးတို့၏မင်းမျိုး မင်းနွယ်ဖြစ်ကာ ဒါဝိဒ်ဘုရင်၊ ရှောလမုန် မင်း ကြီးတို့သည် ယုဒအနွယ်ထဲမှဖြစ်ပြီး သခင် ယေရှုသည်လည်း ဤယုဒအနွယ်မှဖွါးမြင် ခြင်းကိုခံယူသည်။
ယော ၁၈း၃၆ တွင်သခင်ယေရှုက ‘ငါ၏ နိုင်ငံသည်ဤလောကနှင့်မစပ်ဆိုင်၊ ငါ၏နိုင်ငံ သည်ဤလောကနှင့်စပ်ဆိုင်လျင်၊ ငါသည်ယုဒ လူတို့လက်ထဲသို့မရောက်စေခြင်းငှါ၊ ငါ၏ လူတို့ သည်တိုက်လှန်ကြလိမ့်မည်၊ ယခုမူကား ငါ၏နိုင်ငံသည်ဤဒေသအရပ်နှင့်မစပ်ဆိုင်’ ဟု မိန့်မှာခဲ့သည်။ ဤလောကတွင် သူ၏မျိုးဆက် (မင်းမျိုးနွယ်ဆက်) ကိုထူထောင် ရန်ဆိုသော အတွေးအခေါ်အယူအဆနှင့် လုံးဝ ဆန့်ကျင်ဖက်ဖြစ်နေသည်ကို တွေ့ရှိနိုင်သည်။
(၅) Gnostic Gospel ဆိုတာဘာလဲ။
အီဂျစ်နိုင်ငံ Nag Hammadi အရပ်တွင် ၁၉၄၅ ခုနှစ်တွင်ရှာဖွေရရှိသော ၅၂ အုပ်တွဲပါ သည့် ရှေးဟောင်းပုရပိုဒ်များဖြစ်သည်။ ထို ၅၂ အုပ်တွင်(The Gospel of Thomas, The Gospel of Phillip, The Gospel of Truth, The Gospel of Egyptian) စသော စာအုပ် များအပြင်တမန်တော်များကရေးသားထား သည်ဟုဆိုသော (The Secret book of James, The Apocalypse of Paul, The letter of Peter to Philip, The Apocalypse of Peter) စသောစာအုပ်များလည်းပါရှိသည်။ Gnostic ဟူသောစကားလုံးသည် ဂရိစကား Gnosis မှလာပြီး အဓိပ္ပါယ်မှာKnowledge ဖြစ်သည်။
ဤတွေ့ရှိချက်သည်အမှန်တကယ်ဖြစ်ပြီး ဤွ Gnostic Gospels များကိုပိုမို၍ပြည့် စုံစွာ လေ့လာလိုလျင် စာကြည့်တိုက်များသို့ပင် သွားစရာမလိုဘဲ အင်တာနက်ထဲတွင် ပင် လေ့လာနိုင်ပါသည်။ သို့သော်သိထားရမည့် အချက်တစ်မှာ ဤ Gnostic Gospels ကို ပြန်လည်တွေ့ရှိချိန်တွင် အတော်များများဖတ် ၍မရနိုင်လောက်အောင်ပျက် စီးနေပြီဖြစ်ပြီး၊ မေရီ၏ဗျာဒိတ်ရူပါရုံ များရေးသားထားသော နေရာတွင်လည်း အစပိုင်းအနည်းငယ်နှင့် အဆုံး သတ်အနည်းငယ်သာရှိသည်ဟုဆို သည်။ ခြုံငုံ၍သုံးသတ်ရသော် ဤ Gnostic Gospels များသည်အားကိုးယုံကြည်စိတ်ချ ရလောက်သော ရှေးဟောင်းပုရပိုဒ်များမဟုတ် ဟုဆိုရပေမည်။
(၆) သခင်ယေရှုသည်မေရီမာဂဒလအားသူ ၏အမှုတော်မြတ်ကိုဆက်ခံရန်တာဝန်လွှဲခဲ့ ပါသလား။
စာရေးသူ က သခင်ယေရှု သည်သူမရှိတော့သည့်နောက်ပိုင်း သူ၏အမှု တော်မြတ်ကိုဆက်လက်ဆောင်ရွက်ရန် တမန် တော်ရှင်ပေတရုကိုတာဝန်ပေးခဲ့ခြင်းမဟုတ်ဘဲ မေရီမာဂဒလ ကိုတာဝန်ပေးခဲ့ကြောင်းဆိုထား ပေသည်။
အသေအချာလေ့လာမည်ဆိုလျင် သခင်ယေ ရှုသည်သူ၏အမှုတော်မြတ်ကိုဆက်လက်ဆောင်ရွက်ရန် မည်သည့် တစ်ဦးတစ်ယောက်တည်း ကိုမျတာဝန်ပေးခဲ့ခြင်းမရှိသည်ကိုတွေ့ရသည်။
ဧဖက်၂း၁၉-၂၁ တွင် ”ထို့ကြောင့် သင်တို့ သည်တကျွန်းတနိုင်ငံသားမဟုတ်၊ ဧည့်သည် လည်းမဟုတ်၊ သန့်ရှင်းသူတို့၏ အမျိုးသား ချင်းဖြစ်ကြ၏။ ဘုရားသခင်၏အိမ်တော်သား လည်းဖြစ်ကြ၏- အဘယ်သို့နည်းဟူမူကား၊ တမန်တော်တို့မှစ၍ ပရောဖက်များတည်းဟူ သော တိုက်မြစ်အပေါ်၌ သင်တို့သည်ထပ် ဆင့်၍တည်ဆောက်လျက်ရှိကြ၏၊ ထိုတိုက် ထောင့်အမြစ်ကျောက်ကားယေရှုခရစ်ဖြစ်သ တည်း …”ဟုတွေ့ရသည်။
တဖန် ၁ပေ ၂း၉ တွင်”သင်တို့မူကား၊ မှောင် မိုက်ထဲမှအံ့ဘွယ်သောအလင်းတော်သို့ ခေါ်သွင်းတော်မူသော သူ၏ ဂုဏ်ကျေးဇူးများ ကိုဘော်ပြစေခြင်းငှါ ရွေးချယ်တော်မူသော အမျိုးဖြစ်ကြ၏၊ မင်းစည်းစိမ်ရှိသောယဇ်ပုရော ဟိတ်မျိုး၊ သန့်ရှင်းသောလူမျိုး၊ ပိုင်ထိုက်တော် မူသော အပေါင်းအသင်းဖြစ်ကြ၏ . . .”ဟု ဆိုထားပေသည်။ ဤကျမ်းချက်များကိုလေ့လာ ခြင်းအားဖြင့် သခင်ယေရှုသည် သူမရှိတော့ သည့် နောက်ပိုင်း အမှုတော်မြတ်ကိုဆောင်ရွက် ရန် လူတစ်ဦးတစ်ယောက်တည်းကိုမဟုတ်ဘဲ ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးကို အပ်နှံတာဝန်ပေးခဲ့သည် ကိုတွေ့ရှိရပေသည်။ ယုံကြည်သူ ကျွန်ုပ်တို့ အားလုံးသည် အမှုတော်မြတ်ကိုဆောင်ရွက်ရန် ခန့်ထားသော သူများဖြစ်ကြသည်ကို မမေ့ကြ ပါနှင့်စို့။
(၇) အရိမဿဲမြို့သားယောသပ်သည် သခင်ယေရှု၏ ဦးလေးဖြစ်ပါသလား။
သမ္မာကျမ်းစာထဲတွင် အရိမဿဲမြို့သား ယောသပ်သည် သခင်ယေရှုနှင့် မည်သို့အမျိုး တော်သည် ကိုဖော်ပြထားခြင်းမရှိပါ။ သူ၏ အကြောင်းသမ္မာကျမ်းစာတွင်လေ့လာမည်ဆို လျင် . . .
သူသည် ယုဒပြည် အရိမဿဲ မြို့မှဖြစ် သည် (လု ၂၃း၅၀)။
သူသည်ချမ်းသာကြွယ်ဝသောသူ ဖြစ်သည် (မဿဲ ၂၇း၅၇)။
ဂုဏ်သရေရှိသော လွှတ်အရာရှိ (Member of the ruling council, Sanhedrin) ဖြစ်သည် (မာကု ၁၅း၄၃)။
ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်ကိုမျှော်လင့် သောသူဖြစ်သည် (မာကု ၁၅း၄၃)။
သူသည်သခင်ယေရှု ကိုယုံကြည်ကိုးစားသောနောက်လိုက်၊ တပည့်တယောက်ဖြစ် သည် (ယော ၁၉း၃၈)။
မည်သည့်နေရာတွင်မျှ သခင်ယေရှု၏ဦးလေးဖြစ်ကြောင်းမဖော်ပြထားပါ။ The International Standard Bible Encyclopedia တွင် နောက်ဆုံးညစာစားပွဲ ၌ အသုံးပြုသောစပျစ်ရည်ခွက် (Holy Grail) ကို အရိမဿဲ မြို့သားယောသပ်က အင်္ဂလန်နိုင်ငံသို့ ယူသွားသည် ဟုဖော်ပြထားသည်။ ထို့ကြောင့် စာရေးသူ(Dan Brown) သည် (Holy Grail) စပျစ်ရည်ခွက်သည် အမှန်စင်စစ်ခွက် တစ်လုံးမဟုတ်ဘဲ သခင်ယေရှု၏အသွေး အသားကိုလွယ်ထားသောမေရီမာဂဒလ ကို တင်စားထားခြင်းဖြစ်မည်ဟု စိတ်ကူးယဉ် တွေးတောခြင်းလည်းဖြစ်ပေမည်။
မည်သို့ပင်ဆိုစေ ဤဇာတ်လမ်းကိုရေးသား သူ(Dan Brown) ကိုယ်တိုင်ကစိတ်ကူးယဉ် ဇာတ်လမ်း (Fiction) တစ်ပုဒ်သာ ဖြစ်ပါသည်ဟုအတိအကျ ၀န်ခံထားသကဲ့သို့ပင် ကျမ်းစာဖြင့်ကိုးကား အဖြေရှာကြည့်လျင်လည်းအမှန်တကယ်မဖြစ် နိုင်သောစိတ်ကူးယဉ်ဇာတ်လမ်းတပုဒ်သာဖြစ်ကြောင်း တင်ပြလိုက်ရပါသည်။
– Various Sermon from Internet on Dan Brown’s Davinci Code.
မှတ်ချက်။ ၂၀၀၆ ခုနှစ် ဧပြီလတွင် ထုတ်ဝေသော Aroma စာစောင်တွင်ရေးခဲ့သည့် Davinci Code ကို ပြန်လည်တင်ပြထားပါသည်။
Christianity Related Articles, Thawngno
89,573 Since July 2011
သမ္မာကျမ်းစာမှ ပုဂ္ဂိုလ်များ (မောရှေ)